Fetin'ny renirano kanadianina - avia mankalazà an'i Canada 150 amin'ny onin'ny lovan'i Heritage Canada!
Home » Travel Associations News » Fetin'ny renirano kanadianina - avia mankalazà an'i Canada 150 amin'ny onin'ny lovan'i Heritage Canada!
Jona 11, 2017
Androany, ny Canada Heritage Rivers Mankalaza an'i Canada 150 dia namoaka fankalazana iray Kanada amin'ny endrika horonantsary fohy Pan-Canada mitondra ny lohateny “Eau Canada”. Mankalaza ilay video Kanada 150th tsingerintaona nahaterahana ny Kaonfederasiona sy ny lanjanny ary ny lanjan'ireo renirano ao Kanada.
Ny St. John River Society any New Brunswick nahazo fanomezana avy amin'ny The Government of Kanada amin'ny alalan'ny Kanada Fonds 150 izay manome famatsiam-bola ho an'ireo mpiara-miasa amin'ny Program Heritage Heritage Rivers Canada handray hetsika iray eo an-toerana amin'ny reniranon'izy ireo amin'ny taona 2017 ary hankalazana Kanada 150th tsingerintaona nahaterahana. Vondrona mpiara-miombon'antoka valo amby telopolo ao amin'ny renirano lova 35 manerana ny firenena no hanasongadinana sy hankalaza ny maha-zava-dehibe ny renirano ary hanome fotoana ho an'ny Kanadiana hifandray amin'ny lova ony.
Vondron'olona efatra ambin'ny folo nandray anjara no nasaina haneho ny fitiavany sy ny fifaliany ny firenena amin'ny alàlan'ny fihirana ny hiram-pirenena amin'ny ony lova iray. Nivoaka ny sarimihetsika tamin'ny Jona 11, Andro Rivers Kanadiana, ary hojeren'ny kanadiana avy amin'ny morontsiraka ka hatrany amin'ny morontsiraka rehefa mankalaza ny renirano ao am-pon'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo izy ireo. Ity horonan-tsary ity dia haseho ihany koa eny amin'ny Hill Hill, isaky ny alina amin'ity fahavaratra ity, alohan'ny feon-kira sy hazavana Avaratra Avaratra, noho ny fiaraha-miasa amin'ny Departemantan'ny Canada Heritage's Capital Experience Program.
Kanada 150 ny fankalazana manolotra fotoana tsy mampino hananganana fahatsapana hambom-po sy firaiketam-po aminy Kanada amin'ny alàlan'ny hetsika sy hetsika fialam-boly ao amin'ny reniranon'i Heritage Heritage. Ireo hetsika sy hetsika atao ireo dia hankalaza ny renirano sy ny maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny Vazimba, ny fiarahamonina, ny indostria ary ny toekarena, ny tantarantsika ary ny tontolo iainana.
Ireo hetsika sy hetsika ireo dia ahafahan'ny Kanadiana avy amin'ny sokajim-piainana rehetra mankafy sy mianatra momba ny renirano eo an-toerana, manasongadina ny maha-zava-dehibe ny renirano ho loharano anaty rano sarobidy ary manohana ny fitantanan'izy ireo amin'ny ho avy. Hahatonga ny fireharehan'ny firenentsika izy ireo, hampitombo ny reharehan'ny toerana eo an-toerana sy eo amin'ny sehatra nasionaly, ary hanangana ny fahafahan'ny vondrom-piarahamonin'ny ony hiara-hiasa sy hizara loharano amin'ny ho avy.
"Ny 150th tsingerintaona nahaterahan'ny Confederation dia manome ny Kanadiana hanana fotoana mahafinaritra ho tonga mavitrika amin'ny fiarahamonin'izy ireo ary hankalaza ny tantara manankarena amin'ny reniranon'izy ireo. Ny vondrom-piarahamonina manerana ny firenena dia handray anjara amin'ny hetsika izay manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fitehirizana ireo harena voajanahary sarobidy ho an'ny taranaka ho avy. ”
Ilay manan-kaja Mélanie Joly
Minisitry ny vakoka kanadiana
"Ny Lovan'ny Lova Kanadiana dia manana lanja ara-kolotsaina miavaka, ao anatin'izany ny lanjany manan-tantara amin'ny vondrom-piarahamonina sy ny Vazimba, ary ny anjara asany amin'ny varotra sy ny fitaterana. Harena nasionaly masina izy ireo ary mitantara ny tantaran'ny taninay sy ny olontsika, mampiorina ny maha-izy azy sy ny reharehany amin'ireo vondrom-piarahamonina manerana ny firenena. ”
Ilay manan-kaja Catherine McKenna
Minisitry ny tontolo iainana sy ny fiovan'ny toetrandro ary ny minisitra tompon'andraikitra amin'ny Parks Canada
“Misaotra ny Kanada 150 Fund sy Parks Canada noho ny fandraisany anjara ara-bola tamin'ny fanaovana ilay horonantsary, ary koa Terry Kelly Productions sy ireo mpiara-miasa aminay izay naka sary tamin'ny renirano 14 tao anatin'ny 14 andro. Manantena izahay fa hampahatsiahy ny Kanadiana ity horonantsary ity fa mampifandray antsika rehetra ny renirano ary ivon-toeran'ny taloha sy ny ankehitriny ary ny hoavin'ny firenentsika izany ”.
Tale Tetikasa ary Tale Mpanatanteraka
The St. John River Society (New Brunswick)
Ny Kanadianina Rivers System (CHRS) dia programa fiarovana ny renirano any Canada. Niorina tamin'ny 1984, ny CHRS dia manome fankasitrahana ho an'ny firenena Kanada renirano miavaka ary mamporisika ny fitantanana maharitra mba hitehirizana ny soatoavina voajanahary, kolontsaina ary fialam-boly ho tombontsoan'ny Kanadiana, ankehitriny sy amin'ny ho avy. Amin'izao fotoana izao dia misy renirano kanadianina 42 manerana ny firenena, manakaiky ny 12,000 km.